Ny bug ao amin'ny Gmail dia tsy mamela anay hamafa ny atin'ny fako sy ny spam | Androidsis
Ny bug Gmail dia tsy mamela anay hamafa ny atin'ny fako sy ny spam
Nanjary iray amin'ireo rindranasa be mpampiasa indrindra amin'ny Android ny Gmail raha ny momba ny fakan-kevitra momba ny kaonty mailaka rehetra, indrindra ilay iray izay mifanitsy amin'i Google. Maro ireo mpampiasa izay Tian'izy ireo ho foana foana ny boaty boaty, ary izy ireo no miandraikitra ny fanasokajiana sy / na ny famafana ireo hafatra rehefa efa novakianao izany ary, raha nisy izany dia namaly ianao.
Toy izany koa no mitranga amin'ny fampirimana spam, fampirimana izay indrisy mahazo mailaka vaovao isan'andro, noho ny sivana antispam ampiasain'i Google. Betsaka ireo mpampiasa no manamarina ny atiny an'ity fampirimana ity isan'andro raha sendra sendra mailaka iray izay tsy tokony hanao izany ary tampoka teo araraoty ny fotoana anafoanana azy.
Na izany aza, afaka andro vitsivitsy dia efa afaka ny fampirimana spam sy ny fako tsy mampiseho amintsika hafatra ao amin'ny lohateny izay manasa antsika hamafa ny atin'ny lahatahiry rehetra, fomba fiasa izay manakana antsika tsy hamafa tsikelikely ny hafatra.
Tsy toy ny tsiry hafa, ity raha manana fanamboarana haingana ianao, na dia toa hafahafa aza. Mba haseho indray ny hafatra dia mila manodina ny fitaovana fotsiny isika mba hisehoan'ny rindrambaiko Gmail ny rindrina. Avy hatrany dia hiseho indray ilay hafatra mamela antsika hamafa ny atin'ny lahatahiry voalaza rehetra.
Tsy mila manatanteraka ny fizotra famafana amin'ny terminal atsinanana isika, satria hita indray ilay hafatra, Hitohy ho azo ampiasaina izany rehefa miverina mitsangana ny terminal.
Ireo bibikely ireo dia aseho amin'ny kinova v2020.02.02 azo alaina amin'ny APK Mirror, hadisoana efa nisy eken'ny Google ihany, noho izany ny fanavaozana manaraka dia ho vahaolana amin'ity olana ity. Raha tsy te terena hanova ny orientation-n'ny fitaovanao ianao mba hisehoana ity hafatra ity dia azonao atao ny mametraka ilay kinova taloha, isa 2019.12.30 hita ao amin'ny APK Mirror.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny bug Gmail dia tsy mamela anay hamafa ny atin'ny fako sy ny spam
Huawei's AppGallery no fivarotana fampiharana lehibe fahatelo
Ahoana ny fananana maody maizina amin'ny Huawei tsy misy EMUI 10!